एक वर्षमा ५ दिनसम्म कपडा लगाउँदैनन् महिला ! कारण सुन्दै अचम्म लाग्दो – Sanjal Nepal
Homeरोचकएक वर्षमा ५ दिनसम्म कपडा लगाउँदैनन् महिला ! कारण सुन्दै अचम्म लाग्दो
November 23, 2020 admin रोचक 8951
आज यस्तै परम्पराबारे यहाँ उल्लेख गरिएको छ । भारतको हिमाञ्चल प्रदेशस्थित मणिकर्ण उपत्यकामा यस्तो पनि परम्परा छ, जसअनुसार विवाहित महिलाले १ वर्षमा ५ दिनसम्म निर्वस्त्र अथात् नाङ्गै बस्नुपर्ने हुन्छ । यहाँका महिला वर्षमा ५ दिनसम्म शरीरमा कुनैपनि कपडा लगाउँदैनन् । यस्तो अवस्थामा महिलाहरु पुरुषको सामुन्ने देखा पर्दैनन्, एकदम एकान्त स्थानमा बस्ने गर्छन् । हरेक वर्षकाे १७ अगस्टदेखि ५ दिनसम्म यस्ताे यहाँका महिलाले कपडा लगाउन पाउँदैनन् ।
December 11, 2020 admin रोचक 3077
November 21, 2020 admin रोचक 3681
April 26, 2021 admin रोचक 520